Kungakhathaliseki ukuba imimoya yayingumnandi, siyavuya ukuhlaziya i-wardrobe yehlobo, kuba kwikhalenda - ngoJuni! Abafazi bembethe iingubo ezivulekileyo, kwaye kwiipali zokugaya njenge-asphalt zandiwe ... Mhlawumbi, enye yezinto ezizithandayo zeengubo zasehlobo - ziphezulu. Amaphepha omagazini i-Allwomens.ru aphengulula iimpu ze-summer-2008.
Ihlobo, ukushisa ... Kwaye nokuba iholide isasesikhatjeni esisekude, usasafuna iimpahla ezilula kunye nezikhululekile.
Ngelishwa, ilula kakhulu kwaye ikhululekile kakhulu kwixesha elivuthayo iingubo ezikhethiweyo azivumelanga ikhowudi yokugqoka yoshishino.
Nangona kunjalo, umsebenzi - nangona kubalulekile, kodwa kusekhona nje inxalenye yobomi bethu. Kwaye naphantsi kwezinye iimeko, sinokuziva sikhululekile xa sikhetha i-wardrobe yakho.
Yaye ingaba yintoni ebizwa ngokuba yinto eninzi yehlobo lweengubo (kakuhle, ngaphandle kwengubo yokuhlamba, okwenyani)? Mhlawumbi, isihloko - i-blouse evulekile ngaphandle kwemikhono.
Ngenxa yemozulu eshushu, mhlawumbi, into yendawo yonke yokugqoka izigqoko. Abanye abaklami bayakwazi ukudala imizekelo enokubonakala yaneleyo nakwiindawo zoshishino.
Iphumelele ngokukodwa kule festile indlu u-Armani noDonna Karan. Iimpahla eziluhlaza, ngaphandle kwezondo ezingenabundlobongela, ezi ntlobo zetekisi zinikezela ukugqoka phantsi kweelinen zelinen kunye neebhatto zeconti okanye iebhatyi.
Enye inxalenye yalo mgaqo ingaba iingubo zelinen okanye iincwecwe ezincinci ezenziwe ngekotoni eninzi. Yaye ukuba umbala wemibala ungathathi hlangothi, kuyaqondakala ukuba kutheni iiplantshi ezinjalo zivunyelwe kwi-wardrobe yowesifazane weshishini.
Kodwa asikho malunga nale nto. Ngeli hlotywa, abaqulunqi banikezela ngokukhethiweyo kwezinto eziphezulu, kwaye ezininzi zeendlela ezicetywayo zincinci.
Kwiifowuni zefashoni, eziqhelekileyo, ziphawulwe ngembala eqaqambileyo kunye ne-motley evuyayo, iipopu eziqhakazile kunye nemibala ayininzi.
Abafazi ababolekwe kubantu, kubonakala ngathi sele sele phantse zonke izinto ze-wardrobe. Ikhefu eliqhelekileyo eliqhelekileyo lalingenalo.
Abafazi abancinci kuphela babone kulo mkhulu kakhulu kwaye baqala ukuyisebenzisa njengengubo, kungekhona ilinen.
Ngendlela, kwenzeke kungekudala nje, kodwa i-shirt elula ebonakalayo isondele ngokukhawuleza ibe yinto esilungeleyo kwaye i-sexy isifundo sesigqoko sesigqabi samabhinqa njengekhati lomntu.
Nangona kunjalo, njengento evela kwinqanaba le-must-have knitted shirt-style style, mhlawumbi, eli lihlobo ngethuba lokuqala kwiminyaka yamuva.
Ngaloo nto igxininisekile kwiiqoqo zabo zaziqaphele izindlu ezininzi zendlela ze-fashion-D & G, Emporio Armani, Helmut Lang, Isabel Marant, uKarl Lagerfeld, Prada, Sport Max, Vera Wang, Carolina Herrera.
Kuyathakazelisa ukuba akukho mhlophe kuphela, kodwa neminye imibala eyahlukeneyo yenziwa: i-beige, iblue, i-pearl grey, khaki. Ngokufanayo, intsimbi yelinen iyahlukahluka kwiindawo ezahlukahlukeneyo zokubumba - ukusuka kwijezi edayini yelinen ecacileyo ukuya kwisigcawu "esincinci".
Kodwa iiphakamiso ngendlela ye-corsets kunye nesiqingatha-corsets zaziphakathi kweefashthi zeefestile kwixesha eziliqela.
Yiyo kuphela isampuli, bathatha i-erotica enobuqhetseba (i-black leather kunye ne-vinyl), okanye iindawo ezide kakhulu ezidlulileyo-i-Middle Ages, iBaroque.
Konke oku kwakhokelela kwiifom ezinzima zee-corsets kunye neenkozo ezininzi ezingcolileyo. Ngokukhawuleza okanye kamva kwakunzima.
Le hlotyana, iipres-corsets zikhoyo kwiindawo zokuhamba zehlabathi, kodwa ziye zaba ngcamango, zilula kwaye zanamhlanje.
Ukuba sithetha malunga ne-retro, kunokubhekisela kwiifom ezingama-40-50 zekhulu lokugqibela, xa abafazi benqaba kwi-corsets eqinile, kwaye babefuna ukuba neefom ezintle.
Amacwecwe anamhlanje-ama-corsets amamodeli afanelekileyo anamanqanaba avulekileyo, ukusuka kwindwangu emininzi, kunye ne-decor. Bangakwazi ukugqithwa ngamancinci, ibhulukhwe, kunye neengubo zaso nasiphi na ubude kunye nomthamo.
Ukungabikho kokuhlobisa kunye ne-laconicism yale fomu ithetha ngakumbi ngesitayela semidlalo. Ngendlela, baya kujonga kakuhle ngeebhatyi ezikhanyayo kunye neebhatyi.
Njengemigangatho yezemidlalo-i-corsets, i-sky-top -ps-razletayki ibhekisela kwicandelo lolutsha lwefashoni.
Ezi ntonga zimele zigqwekwe kwiingubo okanye iipketi.
Bangakwazi ukuba nomlenze ogqithiseleyo kwi-Empire style
Ngokubanzi, kukho izinto ezininzi eziphezulu, kodwa inxalenye engezantsi yazo zonke iimodeli zifana: zibanzi, zivutha ukusuka kwinqanaba le-coquette okanye umgca ophezulu.
Ukubonakala kweso siqalo kwindlela yokuqokelela imveliso yehlobo eqondakalayo, kubone ukuba abaqulunqiweyo bathathwe ngeli xesha ngetekisi.
Ezi zihloko ziphela ngentliziyo elula kwaye zingabonakala kule ndlela yokugqoka. Uninzi lwezinketho ezikhethiweyo zombini ezisetyenzisiweyo kunye neempendulo zichaze ngokucacileyo kwisimbolo seehappies.
Ekubeni umoya onjalo ovutha phezulu udala ivolumu eyongeziweyo kwinqanaba eliphezulu lalo mfanekiso, kufuneka ligqutywe ngeebhulukhwe ezinxibileyo, iifutshane ezimfutshane okanye i-skirt. Izambatho ezinemibala enemibala epheleleyo, ezizaliswe ngamacwecwe afanayo ziya kudala "umfanekiso we-gypsy".
Yaye yintoni ehlala isetyhini?
Abaninzi babo banomdla omude kwaye unomdla wokuba izihloko ezivulekile kwaye bayavuya ukuzigqoka phantsi kweemeko ezahlukeneyo.
Kubonakala ngathi kwiikholeji zefestile kule hlotyana zizinto ezintle ezikhethiweyo eziya kubafanisa nokuthanda kwaye ngexesha elifanayo abayi kuvumela ukuba bangene ebuntwaneni, bathathe ngokungenazimeko ukuya kwelinye iqela leminyaka.
Okokuqala, unokucetyiswa ukuba uphakamise phezulu kwaye unqabileyo.
Kubonakala ngathi oku akunakwenzeka ukufezekisa ngenxa yomsindo omncinane weli qephu le-wardrobe. Kodwa oku akude kwimeko.
Abaqulunqi banika iimfestile ezixubileyo (ndigxininisa: imida, ayiyikuqhaqhaza!), Umgca we-armhole ongaqhelekanga, uvavanyo olunezintambo kunye namasango agqiba.
Zonke ezi zibukeka zihle kakhulu, kwaye zonke ezi zinto kufuneka zikwazi ukugqoka. Yingakho uninzi lwale mizekelo lufanelekile nakanjani nayiphi na imicimbi yentlalontle. Apha, ngendlela, uboyiweyo, kunye nentambo yenziwe ngetsimbi, kwaye i-appliqués sele ifunyenwe kumhlobiso.
Kwaye kwakhona, "amaRashiya amaRashiya" eMoscow
Iintlobo ezili-10 zeentombi ezibathandwa ngabantu
I-Philippine Beefsteak (Bistek)
Amakhowe asehlathini eselisiwe